Top 5 Mũi khoan sắt Tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Mũi khoan sắt Tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Insimbi yokubhoboza insimbi iyithuluzi lokumba izinto ezenziwe ngepulasitiki, izinkuni, insimbi, njll. Ngesikhathi esifanayo, iyithuluzi elibalulekile ekwenzeni, ukufakwa noma ukulungiswa kwezitsha zensimbi.
Ngakho-ke, imindeni eminingi inomshini wensimbi ongcono kakhulu ongawusebenzisa ngezikhathi zesidingo. Ngakho-ke ukukhetha i-iron drill bit efanele ngokusekelwe kulokho okudingayo, sicela ufunde ukuze uthole esihlokweni esingezansi!
1 Ukwethulwa kwe-iron drill bit
2 Yiziphi izinhlobo zokuzivivinya ezikhona?
3 Izinkampani ezidumile zokumba insimbi
3.2 HSS iron drill bit
3.3 I-Bosch drill bit
3.4 I-Nitto .drill bit
4 Ungakhetha kanjani ukuthenga i-iron drill engcono kakhulu emakethe
4.1 Drill bit material
4.2 Intengo yokuthengisa ye-drill bit
4.3 Ungathengisa kuphi ama-drill bits
4.4 Khetha ukuthenga i-iron drill ngokusho kwempahla kanye nento okufanele ibhojwe
4.5 Sebenzisa imodi efanele ye-drill
4.6 Faka i-drill bit
4.7 Ukupholisa i-drill
4.8 Sebenzisa amandla ngokulinganayo ngesikhathi sokumba
4.9 Gcina umshini ngendlela efanele ngemva kokusetshenziswa
5 Imikhiqizo engu-5 ehamba phambili yokumba insimbi emakethe
5.1 4-32mm .. titanium iron drill bit
5.2 I-HSS cobalt drill bit M35
5.3 I-Makita iron drill bit
5.4 I-Tolsen iron drill bit
Ukwethulwa kwe-iron drill bit
Umshini wokubhoboza insimbi umshini owenziwe ngensimbi, idayimane, nezinto zekhabhoni ezofakwa endaweni kagesi bese ubhobolwa ensimbi noma ezintweni zensimbi eqinile lezo izimbobo zokhuni ezijwayelekile zingakwazi ukubhoboza.
I-aron drill inezingxenye ezimbili eziyinhloko, ingxenye yensimbi nengxenye yangaphandle yethiphu. Ngokuya ngamanani ahlukene, abantu bangakwazi ukubhola besebenzisa izinto ezahlukene. Ngokuvamile, emakethe namuhla, kunezinhlobo ezinhlanu zokubhoboza insimbi ezisetshenziswa kakhulu: insimbi, i-carbon low, i-high speed carbon steel, insimbi ephezulu, i-carbide, i-cobalt ne-diamond drill bits.
Yiziphi izinhlobo zokuzivivinya ezikhona?
Kunezinhlobo eziningi zama-drill bits anezinhlobo ezahlukene namasayizi emakethe. Ngokuya ngenjongo yokusebenzisa, abasebenzisi bangakhetha ezinhlobonhlobo zezingcezu zokubhola ezinosayizi olungile, okuhlanganisa:
Insimbi yokubhoboza ibhithi elingu-8mm
Insimbi yokubhoboza ibhithi elingu-16 mm
Insimbi yokubhoboza ibhithi elingu-20mm
Insimbi yokubhoboza ibhithi elingu-22 mm
Insimbi yokubhoboza ibhithi elingu-1.5mm, ubude obungu-62.4mm.
Ibhithi yokubhoboza okungeyona yensimbi 2.0 mm ubude 6.5 mm
Insimbi yokubhoboza insimbi 2.5 m ubude 75.5 mm
Insimbi yokubhola ibhithi engu-3.0mm ubude 80.0 mm
Izinkampani ezidumile zokumba insimbi
Ukukhetha izingcezu zokubhola zensimbi zemikhiqizo ehlonishwayo kuzoletha imikhiqizo yekhwalithi.
I-Nachi yaziwa njengenkampani egxile ekwenzeni izinto zokwakha nokudala imikhiqizo emisha ehlala isikhathi eside. I-iron drill bit yenkampani ye-Nachi enomklamo omuhle noqinile isetshenziswa kabanzi embonini kagesi yasendlini. Umshini wokubhoboza uklanyelwe ngokukhethekile ukusetshenziselwa ukubhola insimbi noma idayimane eliqinile, ngisho nensimbi noma insimbi engagqwali, kalula nangokushesha. Ikhithi ye-Nachi steel drill ihlanganisa isethi yama-drill bits angu-25 ukusuka ku-1mm kuya ku-13mm ukuze ikusize ubhola noma iyiphi into oyifunayo.
HSS iron drill bit
I-HSS brand iron drill bit iwumshini wokubhola ohlanganisa izinhlobo eziyisisekelo ezifana nalezi:
I-HSS-R drill bit yenzelwe insimbi evamile, insimbi eyingxubevange nezinto zekhabhoni.
I-HSS-G drill bit isetshenziselwa ukubhola insimbi evamile, insimbi engeyona eyensimbi, i-alloy steel, i-aluminium, isiliva, i-nickel, ithusi, insimbi engagqwali 201, insimbi engagqwali 304, izinto ezinobulukhuni obungu-900N/mm2. I-HSS – I-G drill bit inikeza ukumelana nokushisa okuphezulu, igxile ekubholani insimbi engagqwali nezinto eziqinile ezifika ku-1100N/mm2.
I-HSS-G TiN iron drill bit ifakwe ungqimba lwento ye-titanium nitride enyusa ukumelana nokushisa kufike ku-600 degrees Celsius futhi ihlala isikhathi eside izikhathi ezi-3 kunezimbobo ezivamile.
I-Bosch drill bit
I-Nachi bosch ingelinye lamaqembu ezobuchwepheshe aseJalimane ahamba phambili asungulwa ngo-1886 anezinkampani ezingaphansi kuka-720. Le nkampani ikhiqiza imikhiqizo emikhulu okuhlanganisa okokusebenza kwezimoto, izinto zikagesi zasendlini okuhlanganisa nezinsimbi zokubhoboza insimbi. Isici se-Bosch iron drill yakhelwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezihlala isikhathi eside zomugqa wokumba obushelelezi ngesikhathi sokusetshenziswa. Isethi yokumba insimbi inenani elisukela ku-40,000/bit.
I-Nitto .drill bit
Izingcezu ze-Nitto brand drill ezivela e-Japan zithandwa kakhulu kumakhasimende. Ukuqina kwe-drill kuyaziswa ngenxa yekhwalithi ephezulu ye-alloy nezinto zensimbi. Umkhiqizo uheha amakhasimende ngenxa yokuqina kwawo okuqinisekisiwe, ubukhali, ukusetshenziswa ezindaweni eziningi ezihlukene, ukukhiqiza okuphezulu, njll. Ngakho-ke, lokhu kungumugqa womkhiqizo onezindleko eziphezulu kanye nekhwalithi ekhangayo.
Ungakhetha kanjani ukuthenga i-iron drill engcono kakhulu emakethe
Ukukhetha best iron drill Ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa kuwukukhathazeka kwabathengi abaningi. Ngakho-ke udinga ukusekela kulezi zindlela ezilandelayo:
I-material yakha ikhwalithi ye-drill bit ngayinye. Ngakho-ke lesi yisimiso sokuqala okudingeka usinake ukuze uthole i-drill enhle. Ngaphambi kokuthenga i-drill udinga ukuhlola ukuthi i-drill yenziwe ngani. Labo abadinga ukumba insimbi noma insimbi eqinile, i-drill eyenziwe ngedayimane iyisinqumo esihle. Ngaphezu kwalokho, uma unesidingo sokumba izinto ezincane ezifana nokhuni noma insimbi encane, ungakhetha izinto zokumba insimbi.
Intengo yokuthengisa ye-drill bit
Enye yezindlela okufanele uzicabangele lapho ukhetha ukuthenga i-drill yinani. Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zokubhoboza insimbi ezithengiswa ngamanani ahlukene. Intengo yokubhoboza okuhle iyahlukahluka kusuka ku-50,000 kuya ku-500,000 VND kuye ngekhwalithi yomkhiqizo. Ngokuvamile intengo yokuthengisa izofika nekhwalithi yomkhiqizo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthenga i-drill, udinga ukucabangela ukukhetha umkhiqizo ngentengo efanelekile futhi uhlangabezane nezidingo zokusetshenziswa.
Ungathengisa kuphi ama-drill bits
Umbandela ongeke uzitshwe wokukhetha ukuthenga umshini wokucindezela wekhwalithi yilapho i-drill bit ithengiswa khona. Isitolo esinegama elihle sizokunikeza ukuthula kwengqondo mayelana nenani kanye nekhwalithi yomkhiqizo. Iningi lezitolo ze-inthanethi zanamuhla zivela kumasayithi amancane okudayisa angaziwa imvelaphi, okuthinta kakhulu ikhwalithi yomkhiqizo. Ngakho-ke, kufanele uye ezitolo ezidumile zemishini yasendlini ukuze ukhethe ukuthenga imishini yokumba insimbi. Ngaphezu kwalokho, unga-oda ama-drill ezitolo zezitolo eziku-inthanethi ezinedumela elihle njenge Shopee, Tiki, Lazada, Sendo…
Khetha ukuthenga i-iron drill ngokusho kwempahla kanye nento okufanele ibhojwe
Isakhiwo se-drill bit esivamile sinezingxenye ezimbili, ingxenye yangaphakathi kanye ne-coating yangaphandle. Ngokuvamile ingxenye yangaphakathi iyidayimane, i-carbon, i-cobalt, i-black oxide, i-titanium nitride, … uhlobo ngalunye luvame ukuletha izinzuzo ezithile. I-drill bit yenziwe nge-carbon material ephansi, imelana nokuhuzuka kanye nezinga lokushisa eliphansi, ngakho-ke ivame ukusetshenziselwa ukubhola ukhuni oluthambile.
I-drill bit eyenziwe nge-black oxide inokumelana nokugqokwa okuphezulu, ukumelana nokushisa okuhle, ifanele ukubhola insimbi, insimbi, insimbi engagqwali. Ngakho-ke, kuye ngokuthi i-drill kanye nesidingo sokumba, kufanele ukhethe i-drill bit efanele.
Sebenzisa imodi efanele ye-drill
Ngohlobo ngalunye oluhlukile lokubhola, kuzoba nezindlela zokulawula ezihlukene. Ngaphambi kokumba, udinga ukubamba ngokuqinile izindlela zokubhoboza zohlobo ngalunye lomshini ukuze ungasebenzisi imodi engalungile eholela emiphumeleni emibi. Ukusebenzisa imodi yokubhoboza efanele akulungile kuphela ekubholeni, ukonga isikhathi, kodwa futhi nokwenza amakhono okubhola. Uma namanje ungaqondi kahle mayelana nemodi yokumba, kufanele ufunde imiyalelo eyengeziwe ozoyisebenzisa ngaphambi kokusetshenziswa kwangempela ukuze uqinisekise ukuphepha okuphelele.
Faka i-drill bit
Ama-Drills ngokuvamile anesakhiwo esihlanganisa ama-shanks ahlukene okufakwayo, ngakho-ke lapho uwasebenzisa, udinga ukusekela esakhiweni sabo ukuze ufake i-drill ngokuqinile emshinini. Ukuze ugweme ukuphula i-drill bit noma ukuchofa i-drill bit, ukufaka i-drill ngokuqinile kwenza imbobo ibe yinhle kakhulu futhi ilingane.
Uma usebenzisa i-drill isikhathi eside, i-drill bit ingase iguge futhi i-drill nayo ishisa kakhulu. Ngakho-ke, ukwandisa impilo ye-drill, kufanele wengeze imodi yokupholisa.
Sebenzisa amandla ngokulinganayo ngesikhathi sokumba
Iphuzu elilodwa okufanele uliqaphele ohlelweni lokusebenzisa i-drill ukuthi kufanele usebenzise amandla ngokulinganayo. Lokhu akusizi nje i-drill bit ukuthi ilingane futhi ibe yinhle, kodwa futhi kusiza ukunciphisa ukushisa komshini. Njengamanje, kunezinhlobo eziningi zemishini efakwe inkinobho yokuvala isivinini eyenza ukubhola kube lula futhi kwandise impilo yomshini.
Gcina umshini ngendlela efanele ngemva kokusetshenziswa
Ukuze ukwandise ngempumelelo impilo nokusebenzisa isikhathi se-drill bit, udinga ukunaka ukugcinwa komshini. Ngemuva kokuthi usuqedile, kufanele uhlanze i-drill bit, uhlole ipulaki nesistimu yepulaki, bese uqhubeka ukuyigcina. Ungakhohlwa ukufunda kabanzi mayelana newaranti yomshini ukuthenga imikhiqizo engcono kakhulu yekhwalithi.
Imikhiqizo engu-5 ehamba phambili yokumba insimbi emakethe
Uma abathengi besazibuza futhi bezibuza lapho bekhetha ukuthenga imikhiqizo ehlonishwayo nesezingeni eliphezulu emakethe, sicela ubheke izinto ezi-5 eziphezulu ezingezansi:
4-32mm .. titanium iron drill bit
Isethi yezingcezu ezi-3 4-32mm zokubhoboza insimbi ye-titanium ukudala izimbobo eziyindilinga ezintweni ezingaphansi kuka-6mm ngokubhoboza kancane kancane ukusuka kububanzi obungu-4mm. I-drill bit ingashintshwa ngosayizi abaningi abahlukene kusukela kwabancane kuya kwabancane, okuhlinzeka ikhono lokubhoboza izimbobo ezinkulu ngokushesha. Umkhiqizo uthengiswa ngesethi egcwele yezinsimbi ezi-3 ngentengo engaphansi kuka-200,000 VND.
Umklamo ohlangene ofanele ukusetshenziswa ekhaya
Izinto ezihlala isikhathi eside zinikeza amandla okuphinda zisetshenziswe izikhathi eziningi
Intengo yomkhiqizo iphansi kakhulu
Imikhiqizo enamakhanda okubhola amathathu ayikahlangabezani nezidingo ezahlukene.
I-HSS cobalt drill bit M35
I-iron drill bit enekhodi ye-HSS cobalt M35 yenziwe ngobulukhuni obukhulu i-HSS Cobalt M35 steel alloy, ifanele ukubhola izinsimbi eziqinile njengensimbi engagqwali enobude obungu-2 kuya ku-3mm wensimbi yensimbi.
I-drill ine-hexagonal plug chain esiza i-bit ukuthi iqine kakhudlwana entweni ezobhojwa. Ukusetshenziswa kwe-drill bit ukwenza izimbobo ezilinganayo futhi ezinhle esinyathelweni ngasinye somgodi. Ikakhulukazi, abasebenzisi akudingeki baguqule ama-drill bits amaningi ukuze bakhe ukuqina okuphezulu kakhulu ngezinto zekhwalithi ephezulu ezisontekile ukuze zisize ukukhulula izingcezu zokusebenza ngokushesha lapho kubhowa.
Idizayini eqinile futhi ekwazi ukubhola izinto ezinosayizi abahlukahlukene.
I-drill ine-grooves yokubalekela ucezu lokusebenza ukuze umsebenzisi angadingi ukushintsha kancane kancane.
I-drill bit material iqinile ngokuhamba kwesikhathi.
Intengo yokuthengisa yomkhiqizo iphakeme kakhulu
I-Makita iron drill bit
I-Makita iron drill bit itholakala e-Japan, ngakho iqinisekisa ikhwalithi nokuqina. Umkhiqizo unamasayizi amaningi ahlukene ukusiza abasebenzisi ukuthi bakhethe ngokwenhloso yokusetshenziswa. Ikakhulukazi izingcezu zokubhoboza zibekwe endaweni ephathwayo, okwenza kube lula ukuthwala ukuze zisetshenziswe.
Kunama-drill bits amaningi ahlukene ahambisana nezidingo zakho
Ukusebenzisa izinto zekhwalithi ephezulu ukuqinisekisa ukuqina ngokuhamba kwesikhathi
Idizayini yomkhiqizo eyi-compact drill bit efanelekile ukuthwala.
Intengo yomkhiqizo iphakeme kakhulu
I-Tolsen iron drill bit
I-Tolsen iron drill bit ikhiqizwa inkampani yakwaNachi egxile ezintweni zokwakha. Umkhiqizo wenziwe ngezinto ezikwazi ukumelana nokushisa, ukumelana namandla ezinikeza ukuqina okuphezulu okungabholwa kunoma iyiphi into. Isethi ye-drill bit ihlanganisa ama-bits angu-25, i-drill bit ngayinye inosayizi osuka ku-1 nm kuya ku-3 nm.
Umkhiqizo unezinhlobonhlobo zama-drill bits ukusiza abasebenzisi ukuthi bawusebenzise kalula ngezinhloso ezahlukene.
Ipakishwe ebhokisini lamathuluzi elihle nelikahle.
Imikhiqizo yakhiwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezingasonti, ezingasonti noma umuhlwa ukuze uqine.
Umklamo womkhiqizo awumuhle ngempela.
I-Nachi iron drill bits yakhelwe ngokukhethekile ukubhola insimbi noma izinsimbi eziqinile ezihlanganisa insimbi noma insimbi engagqwali. Ikhithi ihlanganisa ama-drill bits angu-25 asukela ku-1mm kuya ku-13mm ukuze akusize ubhora noma yimuphi umkhiqizo owufisayo.
Imiklamo ehlukahlukene ye-drill bit ukuze ivumelane nezifiso zomuntu ngamunye
Umkhiqizo upakishwe kukhithi yamathuluzi eklanywe kahle
Impahla ye-drill bit yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezihlala isikhathi eside
Ngokwabelana okungenhla kukusize ukuthi uzikhethele umkhiqizo insimbi drill bit ilungele ukusetshenziswa. Kungabonakala ukuthi ukuba ne-drill bit efanele kungakusiza ukuthi udale imikhiqizo yokuhlobisa ethambile futhi emihle. Ezingxenyeni ezi-5 eziphezulu zokubhoboza insimbi ngenhla sincoma I-Makita iron drill bit. Ngethemba ukuthi ungakhetha umkhiqizo ofanele ozowusebenzisa nsuku zonke.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingu-3,586, ukuvakasha okungu-1 namuhla)
Tổng hợp 15 cách làm cá diêu hồng hấp ai cũng mê đơn giản thơm ngon tại nhà | Muasalebang